23 Apr, 2015 - 15:04	 2015-04-23T15:22:39+00:00 2015-04-23T15:22:39+00:00 0 Views
NDAKAMUWANA wandaida, makaita basa veKwayedza nechirongwa cheTishamwaridzane. Ndakatoroorwa saka vose vachiri kufona pa0783 187 042 chiregai henyu.*****
Makadii veKwayedza? Ndinokutendai nechirongwa chino. Ndakazomuwana wekushamwaridzana naye saka vose vaindifonera kana vachiri kundifonera pa0714 380 330 ngavachirega havo.
Vose vaifona panhamba idzi 0779 877 090 chiregerai zvenyu ndakamuwana anondipa mazirudo. Makaita zvenyu veKwayedza, ndakaitirwa nyasha naMwari ndakamuwana wepamwoyo.
Ndiri murume ane makore 33 ndiri mupositori ane ndebvu refu-refu semuArab. Ndinoda musikana wekuroora ane makore 25 zvichidzika mutsvuku-tsvuku semuChina. Akanaka, anozvishandira uye anoda kuzova mupositori weAfrica ngaandibate pa0713 319 814.
Ndiri murume ane makore 41 ndinotsvaga mukadzi ane makore 32 – 36 ari positive seni. Andifarira nhamba dzangu idzi 0737 970 101.
Makadini zvenyu veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 30 ndinotsvakawo murume ane makore 36 kusvika 49. Vanoda kundibata nhamba dzangu idzi 0776 294 948.
Ndiri mukadzi ane makore 22 nemwana 1 ndotsvagawo murume ane makore 23 – 30 ari pachokwadi. Asina mukadzi ngaandibate pa0782 286 795.
Ndiri mukadzi ane makore 25 ndinotsvagawo murume ane makore 29 – 35 asina chirwere uye akanakawo. Anoshanda, ari pachokwadi chekuda kuroorwa anenge andifarira anondibata pa0783 491 087.
Ndiri mukomana ane makore 20 ndodawo musikana asina chirwere ane chero makore aainawo. Anondibata pa0783 301 557.
Ndiri murume ane makore 37 ekuberekwa ndinotsvagawo mudzimai ane makore 32 zvichidzika anoda zvemba neni tivake musha. Ndinobatika pa0775 343 926.
Makadii? Ndiri murume ane makore 37 ndinotsvagawo mukadzi wekuroora ari HIV positive. Ndinosha samaneja pane imwe kambani yemarori. Nhamba dzangu 0782 853 696.
Ndiri mukomana ane makore 20 ndinotsvagawo musikana ane makore 18 ari pachokwadi. Anoda ndifonere pa0775 146 227.
Ndiri kutsvagawo murume ane makore 40 zvichidzika ari pachokwadi. Ndiri HIV positive, handina mwana uye ndine makore 27. Ndinobatika pa0717 325 022.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 45 ekuberekwa nevana 2 uye ndinodawawo mudzimai ane vana 2 akafirwa seni ane makore 30 kusvika 45. Ngaave anoshanda kana asingashande anoenda kuchechi uye akarongeka. Ndakambonyorera asi hapana wandakawana ndiri kusangana nematsotsi. Vanoda ndifonerei zvenyu makasununguka pa0783 705 227. Ndinobva kuMacheke, ndiri murimi wezvese.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 43 okuberekwa ndinotsvagawo mukadzi anoda kuroorwa anoshuvirawo kugara nomurume. Ndinoda akasvika Form 4 ane makore 33 kusvika 40. Anenge azvifarira anondibata panhamba idzi 0779 336 860 asi pfambi kwete.
Ndiri mukadzi ane makore 36 nevana 2 uye ndinodawo murume ari HIV positive. Ari pachokwadi anoora ngaandibate pa0773 078 025.
Ndinosvaka mukadzi wekuroora, ndine 35 makore. Nhamba yangu 0773 830 511.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 25 ndinotsvagawo murume anondida ari HIV positive ane makore 26 kusvika 36. Anondida ndibate pa0776 893 293 asi matsotsi kwete.
Ndiri mukadzi ane makore 32 nevana vatatu, ndiri HIV positive uye ndinodawo murume ari pachokwadi asinganwe doro. Ngaave anonamata, ndiri muHarare. Nhare yangu 0783 395 045.
Ndiri mukadzi ane makore 34 uye ndoda shamwarirume yakavimbika. Nhare yangu 0777 131 281.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Ngaafone pa0733 286 882, ndinoshanda uye ndogara kuChitungwiza.
Ndinonzi Vide ndinodawo musikana ane makore 19 kusvika 21. Anondida anofona pa0718 124 908.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane mwana 1 ndinotsvakawo murume ane makore 28 kusvika 30 asina mukadzi uye ari pachokwadi anoda kuvaka musha. Ndibatei pa0716 257 733.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 2 ndinodawo murume wekufambidzana naye ane makore 35 zvichikwira ari pachokwadi uye anoshanda. Vane vakadzi kwete, nhamba dzangu 0775 644 728.
Ndiri murume ane makore 43 ndotsvagawo mudzimai ane makore 35 kusvika 40 ari mukobvu. Ndinobatika pa0772 654 191.
Ndiri mukomana ane makore 23 asati aroora, ndinoda musikana ane makore 18-24 ari HIV negative sezvandiriwo. Ngaave anoenda kuchechi, ini ndinoita basa remawoko. Anoda ngaafone pa0783 587 982 asi macall me back kwete.
Ini ndiri mukadzi ane mwana 1, ndinotsvagawo murume ane chirwere ane rudo uye anoshanda. Ndinoda ane makore 35 kusvika 40 anoshanda asi ane mukadzi kwete. Ndinoda ari pachokwadi nhamba yangu iyi 0783 109 104.
Ndiri murume ane makore 31 nemwana 1, ndiri HIV positive uye ndinoda musikana ane makore 21-31. Ngaave anonamata, anoratidzikawo pachiso. Nhare yangu 0778 002 994, ndiri pachokwadi.
Ndiri kutsvagawo murume akavimbika ari pachokwadi wekufambidzana naye ari HIV negative. Ngaave ane zvaanoitawo muhupenyu. Ane makore 37 zvichikwira ndibate pa0716 563 930.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 19 ekuberekwa, HIV negative uye ndinotsvagawo mukomana akavimbika anoda zvekuroora ane makore 25 – 29. Ngaave asina kumbobvira akaroora nekuti ini ndiri musikana akakwana. Anoda ngaafone pa0775 744 295.
Makadii? Ndiri mukadzi ane makore 21 nemwana mumwe uye ndinodawo murume kana mukomana ane makore 24 – 30. Ari pachokwadi ane mwana kana asina andifarira ngaandibate pa0782 340 137.
Ini ndiri mukomana ane makore 30 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 20 – 25 ari pachokwadi. Ndinoita basa remawoko. Anenge andifarira ndibate pa0783 626 130.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 25, HIV positive uye ndinotsvagawo murume ane makore 30 – 35 ari pachokwadi. Ndine mwana mumwe, handishandi. Vanoda nezvangu ndibatei pa0717 229 655.
Ndiri murume ane makore 30 ndinotsvaga mukadzi ane makore 18 -26 wekuroora, ane rudo uye anoda zvemusha. Ngaave akasimba pahutano uye anoda kuongoroorwa ropa. Ndinoda ari kwaMurehwa, Goromonzi, Mutoko, Musana, Domboshava, Chikwaka kana anogara munzvimbo dzakatenderedza Harare.Vanotamba tambirai kure. Ndibatei pa0774 808 537.
Ndiri mukadzi ane makore 46 ndinotsvaga shamwari yechirume isina mukadzi ine makore 48 – 60. Nhamba yangu 0778 252 062.
Ndiri murume ane makore 57 ndakashaikirwa nemudzimai wangu. Ndinotsvaga mudzimai wokuchengetana naye anoda zvepamusha uye anonamata. Zvimwe tozotaura, ndibatei pa0779 887 452.
Makasimba here veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 34 ekuberekwa ndiri kutsvaga musikana wekuroora anoda zvemba ane makore 24 kusvika 32. Vandifarira nhare yangu 0778 008 600.
Ndiri mukadzi ane makore 28, handina mwana uye ndiri HIV positive. Ndinotsvakawo murume anondida ari positive, ngaave anoshanda uye asingaratidze kuti anorwara. VeKwayedza ndinoda ari pachokwadi nekuti ndanzwa nekutambisirwa nguva yangu kuburikidza nebepanhau renyu. Nhare yangu iyi 0773 050 542.
Makadii? Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvagavo musikana ane makore 19 kusvika 23 ari pachokwadi. Ndinoda anoda zvemba kwete zvekutamba. Anotya Mwari ngaandibate pa0737 702 554.
Ndiri mukadzi ane makore 48 ndodawo murume wekuroorana naye ane makore 49 zvichienda mberi.
Ndine vana vangu vatatu vakawanikwa vose uye ndinogara ndega. Vanoda ndibatei pa0733 859 362.